प्रधानमन्त्रीले राधिकालाई भन्नुभयो- 'म तुलसीको बोट हुँ, स्याहार भएन भने ओइलाउँछु' - हाम्रो देश
प्रधानमन्त्रीले राधिकालाई भन्नुभयो- ‘म तुलसीको बोट हुँ, स्याहार भएन भने ओइलाउँछु’
काठमाडौं : फागुन महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि विशेष महिना हो। यही महिनामा उहाँ जन्मिनु भयो (फागुन १०) र यही महिनामै उहाले जीवनको महत्वपूर्ण अर्धाङ्गिनी राधिका शाक्यसँग (फागुन २२) लगनगाँठो कँस्नु भएको हो । साथै यहि महिना (फागुन ३ गते) देशको दोस्रो पटक कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनु भयो ।
उहाँको कुटीमा अचानक एकजना गुरागाईं वृद्धा पाल्नुभयो। उहाँ त्यो कुटीमा केही वर्ष बस्नुभयो। गाउँभरिका मानिस उहाँलाई फलफूल, दूध, नैवेद्य चढाउँथे। यसअघिसम्म उहाँलाई संसारबारे मतलब थिएन। उहाँका ज्ञानगुनका कुरा सुन्न गाउँ भरिका मानिस आउँथे, सुन्थे, जान्थे।’‘हरेक बिहानझैँ त्यो दिन पनि उसैगरी गाउँभरिका मानिस उहाँको प्रवचन सुन्न आए। उनीहरुले अन्य दिनझैँ फलफूल र अनेकन चिज ल्याएका थिए।
मेरा लागि सन्त भ्यालेन्टाइन त उहाँ हो, जसले एउटी स्त्रीसँग जीवनको अन्त्यमा जुन प्रेम गर्नुभयो, त्यो प्रेमका लागि जस्तोसुकै अवहेलना र वचन पनि खेप्न तयार हुनुभयो।’‘उहाँले यो कुरा लुकाउन पनि सक्नु हुन्थ्यो तर लुकाउनु भएन। लुकाएर म आफैँलाई ठग्न सक्तिनँ भन्नुभयो। भोलिदेखि म यहाँ बस्ने छैन, तिमीहरु नआउनू भनेर उहाँले सबै कुरा सुनाउनुभयो। त्यसपछि उहाँ त्यो जोगीकुटी छाडेर हिँड्नुभयो।’
उहालाई कठोर का’राबास सुनाइयो। १४ वर्षसम्म उहा जेल पर्दा उहाको स्वास्थ्य यति खस्क्यो कि त्यो बेलाका पार्टीका सदस्यहरुमा उहाको राम्रो स्याहार नभए थोरै वर्षको अतिथि पो हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता थियो। यो चिन्ता हटाउन राधिकासँग ओलीको बिहे गराइ दिन पार्टी नेताहरु माधव नेपाल, प्रदीप नेपाल लगायतका नेताबीच छलफल चल्यो। २०३६ सालमै नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा जागिरे भइसक्नु भएकी राधिकाको भरथेग भए, ओलीको राजनीतिक जीवन र स्वास्थ्य सहज हुने आँकलन साथीभाइको थियो।
बिहे हुनुको अर्को कारण भने उहा पार्टीका विविध कार्यक्रममा गाउँठाउँ पुग्दा त्यो घरमा वधु माग्न पुगेका हुन् कि भन्ने खोजिनीति हुन्थ्यो। यस्तो समस्याबाट आजित हुनुभएका उहा एउटा स्थायी समाधानको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। यसै खोजीको क्रममा महिला संगठनकी कार्यकर्ता राधिका सबैको नजरमा पर्नुभएको थियो ।‘मैले ओलीजीका बारेमा पहिले सुनेकी मात्र थिएँ, व्यक्ति देखेकी थिइनँ,’ राधिकाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बैठक कक्षमा भन्नुभयो, ‘मैले पहिलो पटक उहाँलाई २०४४ साल असारमा जेलबाट निस्के पछि पाटन इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसले उहाँको स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देखेकी थिएँ।
ठट्टापछि केही शान्त हुँदै प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ, ‘यो अलग कुरा हो, उनले भनेको समय र मैले दिने समय एकै हुँदैन। समयमा खाने, सुत्ने, उनले भनेको एउटा स्थिति हुन्छ मेरो स्थिति अर्को हुन्छ। उनका लागि त्यो उल्लंघन हुन्छ।’राधिकाका लागि उहाको पतिको स्वास्थ्य र जीवन ठूलो कुरा थियो, त्यसैले हस्तक्षेप गर्नु स्वाभाविक थियो। यत्ति नगरेको भए उहाको आयु यत्ति लामो नहुन पनि त सक्थ्यो !
‘त्यै त, म आफैँ पनि छक्क परेको छु !’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘मलाई त २०३१ सालमै मर्छु कि क्या हो भन्ने लागेको थियो, तर मरिनँ, त्यसपछि २०३३–३४ सालमै टिबि भएर, अल्सर भएर अन्तिम अवस्थामा थिएँ। त्यो बेला पनि कसरी बाँचेँ जस्तो लाग्छ ।’ बिहेअघि नै ओलीले राधिकालाई भन्नुभएको थियो, ‘झार दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा त्यत्तिकै फोहोरमा पनि हलक्क बढ्ने र अर्को स्याहार नभई नहुने। म चाहिँ तुलसीको बोट हुँ। मलाई स्याहार भएन भने ओइलाउँछु। सफा र सुग्घर राखिएन भने सुक्छु।’ ओली को तुलसी विम्ब समयक्रममा ठ्याक्कै प्रमाणित भयो। वास्तवमा उहा तुलसी नै प्रमाणित हुनुभयो, देशको शिरमा फक्रने तुलसी ! (मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५ मा नागरिकमा प्रकाशित)